Azụmaahịa nke ịde blọgụ = Nchọpụta | Martech Zone
Monday, October 16, 2006 Satọde, Febụwarị 25, 2017 Douglas Karr
Biko were otu elekere n’ime izu gị were lee vidio a Dave Taylor.
Ọ bụ nchịkọta dị egwu nke ihe kpatara eji ede blọgụ, gịnị kpatara iji blọọgụ na azụmaahịa gị, uru nke ịde blọgụ na njikarịcha njin ọchụchọ, uru nke ịza ajụjụ na blọọgụ gị dị ka onye ọrụ mepụtara ọdịnaya… ọ bụ naanị ọtụtụ ozi na nnukwu ngosi.
Tags: Mgbakwunye nzukoblogịde blọgụịde blọgụ maka seoịde blọgụ azụmahịaụlọ ọrụ ịde blọgụDave Taylorokwu
Ọkt 16, 2006 na 1:07 AM
Daalụ maka njikọ ahụ, Douglas. Enwere ọtụtụ ekele.
Oh, ma ọ bụrụ na ị na-eche, ogwe aka m ka mma ugbu a, ekele, na èbè ahụ laghachiri na ụlọ ọgwụ!
Ọkt 16, 2006 na 1:43 AM
Obi na-adị gị nnọọ mma, Dave. Achọpụtara m ihe edeturu na saịtị gị na ogwe aka na-eme nke ọma! Obi ụtọ ịnụ ya !!!